Muuri News Network » Deg Deg: Wafdi Wasiiro iyo Xildhibaano ah oo Gaaray Gaalkacyo + Xaalada
Deg Deg: Wafdi Wasiiro iyo Xildhibaano ah oo Gaaray Gaalkacyo + Xaalada
Wefdigii Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ee ku haray Magaalada Garoowe Ee Gobolka Nugaal, ayaa xalay safar dhinaca dhulka ah ku tagey Magaalada Gaalkacyo.
Wefdiga Ra’iisal Wasaaraha oo Jimcihii Magaalada Garoowe u tagey, sidii xal loogu heli lahaa xiisadda dagaal ee ku soo korortay Magaalada Gaalkacyo, ayaa waxaa dib kaga soo laabtay Ra’iisal Wasaaraha, halka wefdigiisiina uu Sabtidii kaga soo tagey Garoowe.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo hogaaminaayo wefdiga gaaray Magaalada Gaalkacyo, ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Waqooyiga Gaalkacyo oo Puntland ay ka arrimiso.
Wefdigan, ayaa waxay kulamo gaar gaar ihi ay la leeyihiin Masuuliyiinta Galmudug & Puntlnd, ee ku kala sugan Koonfurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo.
Gudoomiyaha Gobolka Mudug Ee Maamulka Galmudug, C/rashiid Xaashi Cartan oo ka hadlay wefdiga isugu jira Wasiirada & Xildhibaanada, ayaa sheegay in dhankoodu ay si diiran ku soo dhaweynayaan.
Gudoomiyaha, ayaa carabka ku adkeeyay in ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dhammaanba inta juhdiga ku bixinaysa, sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka aloosan Magaalada Gaalkacyo, sida uu yiri.
Ugu dambeen waxaa saakay degan xaaladda guud ee Magaalada Gaalkacyo, ka dib dagaalkii cuslaa ee Sabtidii ka dhacay, inkastoo Ciidamada Galmudug & Puntland ay weli isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay.